Phakathi zonke izinhlobo engavamile ifenisha ukulengiswa hammock-isitulo zezitsha. Into enjalo-accessory ngempela yasekuqaleni ezingaba ukuhlobisa hhayi kuphela isikhala engadini, kodwa futhi nursery, lokulala noma ngisho egumbini lokuphumula. Kuyinto imfanelo esisemqoka of ngokuvumelana kancane, uhlezi kahle.
Umsuka wegama hammock kuyinto eduze okuhlobene impucuko yasendulo abakhileyo zomdabu of America, wanika emhlabeni eziningi ezafika nomuntu ewusizo futhi akumangalisi lokhu. Kumisiwe embhedeni abomdabu zadalwa emagxolweni isihlahla Hamaca, kusukela elafika igama lalo engavamile, design kodwa ukhululekile. izinzuzo zayo ziye zalinganisela ukuthi iyizigidi wonke eMelika Ephakathi naseNingizimu Melika. useyili Ulenga ngenhlonipho ngokuthi "sombuso onkulunkulu". A ezimbalwa kubo babesendleleni alethwa eYurophu Columbus, futhi ngokushesha waba undab 'uzekwayo amatilosi abahambi.
Ngokuhamba kwesikhathi amamodeli hammock ziye zashintsha, namuhla banikele kungabonakala izingadi eziningi ngisho emakhaya. Zisetshenziswa ngoba ukuzijabulisa nokuzilibazisa. Bona sizijabulise nabanye izingane kanye nabantu abadala. Useyili buyehluka kuye indaba ka ukukhiqiza, indlela okunamathiselwe, khona / ukungabikho ukwesekwa. Zingaba Indwangu, ukweluka, izintaba, umile. Kukhona useyili double enophahla-kombhede, enezingane ezinezidingo ezikhethekile, useyili izilwane, Yiqiniso, hammock-isitulo, ukuvumela ukudala ekhoneni siqu engadini noma endlini.
Ngokokuqala ngqá onjalo esihlalweni ukumiswa ngoba indlu wadalwa umklami Nanna Ditzel eDenmark ngo-1957. Umklamo ifomu engavamile ethandwa kuze kube manje futhi esetshenziselwa zokuhlobisa ezindlini kanye izindlu zasemaphandleni. Lokhu Lodge kusebenziseka kalula izici design ergonomic futhi ezihlukahlukene amamaterial kuyiphi uzimele kwenziwa, ungakhetha ukubuka ku yakhe esikuthandayo. Lokhu kungaba Wicker noma Rattan ukulengiswa esihlalweni kokuba igobolondo kanzima, futhi kungaba ngesimo umfuziselo wanamuhla kweqanda, eyenziwe acrylic noma plastic okusobala. Ukuze kube lula ngaphakathi isakhiwo okwesikhashana embondelene pillows zokuhlobisa noma omatilasi esithambile.
Phakathi nenqwaba onobuhle emangalisayo elula futhi zikhululekile ezikhishwe hammock-isitulo Cartagena. Yena sokuhleba kusukela ntambo polyamide ngesandla, ehlotshiswe umbukwane umphetho isiguqo elikulo kusukela ukotini polyester Indwangu imvelo yamathebhu "hollofaybera". Lokhu kwaziswa Kulula ukugeza, akukho ukusonteka futhi ngokushesha ubuyisela ifomu. Bilateral umcamelo nesembozo akuvumele ukushintsha umbala. Sami useyili yalolu hlobo ngokuvamile omnyama, onsundu, beige kanye brown nemibala yokwenza e engela nobude usebenzisa sezindophi, enza umsebenzi sivala futhi sitheza eluka zokuhlobisa. Lokhu kukuvumela ukuba ulungise Esihlalweni kakhulu isikhundla ukhululekile. I-hammock kungenziwa okwesikhashana kusukela hook ophahleni, ingafakwa phansi nge ukwesekwa ezikhethekile. Lo mklamo ngeke uphumule hhayi kuphela emva kwezinsuku zokusebenza, kodwa kuyoba njengabantu stylish umklamo landscape noma iliphi igumbi.
Hhayi ngaphansi kuka umhlobiso sokuqala nensimu yendlu iyoba umkhiqizo eyenziwe Macramé imiklamo. Hammock situlo, owenziwa ngezandla, kuzohluka hhayi kuphela amandla, kodwa futhi eyingqayizivele ubuhle filigree. umsebenzi Lokhu kombhali izogcizelela isimo umnikazi.
Hammock-isitulo zingase zishintshe kakhulu - kusuka classic kuya okunethezeka amafomu laconic. Lesi sakhiwo ukumiswa kuhlongozwa nge anezikhala zokuzivikela, i isisitho selanga endlini, ngiphele ocebile, imihlobiso kanye ezihlalweni ukhululekile. Uneziqu i sizole emangalisayo, inikeza yinto entsha, umuzwa wokuthanda weightlessness nenduduzo nsuku zonke.
Pink salmon salmon anosawoti ngaphansi: iresiphi ngesithombe